Ahlusunna oo ka hortimid doorashada Madaxweynaha Galmudug | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Ahlusunna oo ka hortimid doorashada Madaxweynaha Galmudug
Dhuusamareeb (Radio Gaalkacyo):- Maamulka Ahlusunna Waljameeca ee Gobolada Dhexe ayaa kasoo hor jeestay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Sheekh Maxamed Shaakir oo ah Madaxweynaha Ahlusunna Gobolada Dhexe ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn doorashada ka dhacday magaalada Cadaado isagoona sheegay in Madaxweynaha shalay la doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu u yaqaan nin ganacsade ah.
Sheekh Shaakir ayaa sheegay in Dawladda Federaalka Soomaaliya ay juhdi gelisay in la sameeyo heshiis dhexmara Ahlusunna iyo Galmudug balse ay ka socon weyday dhanka Madaxda Galmudug sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha Ahlusunna ayaa rajo aan fiicnayn ka muujiyay wadahadal iyo heshiis dhexmara labada Maamul ee Galmudug iyo Ahlusunna wuxuuna sheegay in mar walba dhankooda ay ka go’neyd in la wada hadlo oo la heshiiyo.
Diidmada kasoo yeertay Ahlusunna ayaa kusoo beegmaysa xilli maalintii shalay ahayd lagu doortay Magaalada Cadaado Madaxweynaha Cusub ee Galmudug oo loo doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf.